Tag: kuchengetedza | Martech Zone
Email Kushambadzira: Nyore Subscriber Chinyorwa Kuchengetedza Ongororo
Wednesday, May 27, 2020 China, May 28, 2020 Douglas Karr
Vanhu vanozvidza kukosha kwemunhu anonyorera. Heano kuputsika kwekuti sei kwete chete kuyera kukosha, asi maitiro ekuongorora runyorwa kuchengetwa kuti uzive kwekuwana vatengi vatsva uye vangani vane runyorwa rwekuchengetedza ongororo. Mharidzo pepa rekushandisa rakabatanidzwa!
Paunenge uchiedza kuwana mutengi mutsva, ndinotenda zvechokwadi chipingamupinyi chikuru chaunofanira kukunda kuvimba. Mutengi anoda kunzwa sekunge uchasangana kana kupfuudza zvinotarisirwa kune chako chigadzirwa kana sevhisi. Munguva dzakaoma dzehupfumi, izvi zvinogona kutonyanya kuita chinhu sezvo tarisiro dzakatochengetedzwa pamari yavanoshuvira kushandisa. Nekuda kweizvi, ungangoda kugadzirisa ako ekushambadzira
Chipiri, April 21, 2020 Chipiri, April 21, 2020 Rakshit Hirapara
Iyo Coronavirus yakasimudzira bhizinesi renyika uye iri kumanikidza bhizinesi rega rega kuti ritarise patsva izwi rekuti kuvimbika. Kuvimbika Kwevashandi Funga kuvimbika kubva mumaonero emushandi. Mabhizinesi ari kudzinga vashandi kuruboshwe uye kurudyi. Iko kushaikwa kwemabasa kunogona kupfuura 32% nekuda kweCoronavirus Factor uye kushanda kubva kumba hakuwani maindasitiri ese kana chinzvimbo. Kusiya vashandi basa mhinduro inoshanda kudambudziko rezvehupfumi… asi hazviite kuti vanhu vade kutendeka. COVID-19 inokanganisa